China LEDD620620 မျက်နှာကျက် LED Dual Dome ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလှည့်လည်အလင်းနှင့် Wall Control ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများနှင့် | Wanyu
LEDD620620 မျက်နှာကျက်ကို Dual Dome ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလှည့်လည်မီးခုံနံရံထိန်းချုပ်ရေး
LEDD620 / 620 သည်အိမ်မိုးမျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုအလင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
မူရင်းကုန်စည်ကို အခြေခံ၍ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောထုတ်ကုန်အသစ်။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအခွံ၊ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဆင့်မြှင့်ထားသောအပူလွန်ကဲမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ၇ ခုမီးလုံး၊ ၇၂ မီးလုံး၊ အဝါရောင်နှင့်အဖြူ ၂ ရောင်၊ အရည်အသွေးမြင့် OSRAM မီးသီးများ၊ အပူချိန် ၃၅၀၀-၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး CRI ၉၀ ထက်ပိုသောအလင်းရောင် ၁၅၀,၀၀၀ အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ operating panel သည် LCD touch screen၊ အလင်းရောင်၊ အရောင်အပူချိန်၊ CRI သည်ချိတ်ဆက်မှုအပြောင်းအလဲများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဆိုင်းထိန်းလက်နက်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေ့လျားပြီးတိကျစွာနေရာချနိုင်သည်
ဝမ်းဗိုက် / အထွေထွေခွဲစိတ်မှု
နှလုံး / သွေးကြော / ရင်သားကင်ဆာခွဲစိတ်ခြင်း
■စိတ်ဒဏ်ရာ / အရေးပေါ် OR
urology / TURP ■
ENT / Ophthalmology ■
endoscopy angiography ■
2. Shadow အခမဲ့စွမ်းဆောင်ရည်
အဆိုပါ arc ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ operating အလင်းကိုင်ဆောင်သူ, multi- အချက်အလင်းအရင်းအမြစ်ဒီဇိုင်း, လေ့လာရေးအရာဝတ္ထုအပေါ် 360 ဒီဂရီယူနီဖောင်း illumination, အဘယ်သူမျှမတစ္ဆေ။ ၄ င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားပိတ်ဆို့ထားလျှင်တောင်မှအခြားယူနီဖောင်းမျိုးစုံ၏ဖြည့်စွက်မှုသည်စစ်ဆင်ရေးကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
3. မြင့်မားသော Display ကို Osram မီးသီး
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုအလင်း၏အရောင်အပူချိန်၊ အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုနှင့်အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းအညွှန်းကို LCD control panel မှတဆင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Parallel circuit သည်အုပ်စုတစ်ခုစီသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသီးခြားလွတ်လပ်သည်။ အကယ်၍ အုပ်စုတစ်ခုပျက်စီးလျှင်အခြားသူတို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုမှာနည်းသည်။
Over-voltage protection သည် voltage နှင့် current ကန့်သတ်တန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်သွားပါက system circuit ၏လုံခြုံမှုနှင့် high-brightness LED lamp များအားသေချာစေရန် system သည် power ကိုအလိုအလျောက်ဖြတ်သွားလိမ့်မည်။
LEDD620620 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Operating အလင်း
ရှေ့သို့ LEDD730740 မျက်နှာကျက်ကို Dual Head ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအလင်းနှင့်မြင့်မားသောလျှပ်စီးပြင်းထန်မှု
နောက်တစ်ခု: LEDD500 / 700 မျက်နှာကျက် CE လက်မှတ်နှင့်အတူနှစ်ထပ်ခေါင်းဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလင်း
LEDL100S LED Gooseneck မိုဘိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲ ...
LEDL260 CE အတည်ပြုပြီးရပ်တည်ချက်အမျိုးအစား LED ခွဲစိတ်ကုထုံး ...
LEDD620 မျက်နှာကျက် LED Single Head ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလင်းရောင် ...
LEDD500 / 700C + M မျက်နှာကျက်ကို LED နှစ်ထပ်အမိုးခုံး ...